July Dream: November 2007
မနေ့က နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်မှာ သိကျွမ်းဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အီးမေးလ်တွေ ပို့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Forward အီးမေးလ်မှာ လိပ်စာတွေကို BCC မှာထည့်ပြီး ပို့ပေးစေလိုကြောင်း ရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ဆီကို မေးလ်မပို့ပါနဲ့လို့ မရေးထားပါဘူး။ ဒီအတိုင်း To မှာထည့်ပြီး ပို့တဲ့အခါကျတော့ လိပ်စာတွေ အားလုံးကို မြင်နေရပါတယ်။ ကိုယ့်အီးမေးလ်ကို မသိစေချင်တဲ့ လူတွေဆီကို အီးမေးလ်လိပ်စာ ရောက်သွားနိုင်သလို တခါမှ မသိကျွမ်းဘူးတဲ့ လူတွေကနေ အီးမေးလ်တွေ ပြန်ဝင်လာတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ရှိသမျှ တွေ့သမျှ အီးမေးလ်ကို ဂျီတော့ခ်မှာ Invite ပြီး စကားပြော လေဖော အီစီကလီစီ လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေပါပဲ။
အမှန်တိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဂျီတော့ခ်မှာ အမြဲတမ်း အွန်လိုင်းရှိနေတတ်တဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ် မန်ဘာတွေပါ။ ကျန်တဲ့လူတွေက ဇူလိုင်ဒရမ်း ဘလော့ကနေတဆင့် သိတဲ့သူနဲ့ အပြင်လောကမှာ သိကျွမ်းဖူးတဲ့ သူတွေပါ။ တကယ်တမ်း ပြသနာဖြစ်စေတဲ့ မေးလ်ပို့တဲ့သူတွေက အပြင်ကနေ သိကျွမ်းဖူးတဲ့ လူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အသိအကျွမ်းတွေကနေ တဆင့်တဆင့် ကျွန်တော့် ဂျီတော့ခ်ကို ပြဿနာပေးနေကြတာပါ။ ဖိုရမ်နဲ့ ဘလော့က အသိမိတ်ဆွေတွေက အီးမေးလ် ပို့စရာ မလိုလောက်အောင် နေ့စဉ်ထိတွေ့မှု ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီလို တွေ့သမျှ Invite လုပ်တဲ့ကေ့စ်မှာ အများအားဖြင့် ဖွန်ကြောင်တွေ ဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက ငကြောင်တွေ ပါသလို မြန်မာပြည်က ငကြောင်တွေလည်း ပါပါတယ်။ သူတို့ကြောင်နေတဲ့ သူတွေကနေတဆင့် ရလာတဲ့ Forward အီးမေးလ်တွေက လိပ်စာတွေကို တွေ့သမျှ Invite လုပ်ကြပါတယ်။ ပြီးရင် အထီးအမ စုံစမ်းပြီး အမဖြစ်နေရင် နောက်ထပ်ကြောင်ဖို့ လုပ်ပါတော့မယ်။ အထီးဖြစ်ရင်တော့ အရင်ဦးအောင် ကောလွတ်ပါမယ်။ အတော်လေးကို အချိန်အားနေတယ် ထင်ပါတယ်။ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ခင်မင်ရာ မိတ်ဆွေဟောင်း သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ ဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်လို့ Add လုပ်ထားလိုက်တယ်။ နစ်ခ်ဆိုတာ ပေးချင်သလို ပေးထားတော့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ချက်ချင်း ခွဲမသိနိုင်ဘူးလေ။ သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေဟောင်းလား လူသစ်လားဆိုတာ ဘယ်လိုခွဲမလဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးရှင်တွေက ကျွန်တော့်ကို ခင်လို့မင်လို့ စကားစမြည် ပြောရင် အဆင်ပြေပေမယ့် အခုလို အလုပ်ပျက်လောက်အောင် အထီးအမခွဲခြားနေတဲ့ မေးခွန်းပေါင်း များစွာကို ထိုင်ဖြေနေရတာကိုတော့ မကြိုက်တာ အမှန်ပါပဲ။ ပြန်မဖြေပြန်တော့လည်း ကြီးကျယ်တာလားတဲ့။ ပြီးတော့ သူတို့ကပဲ မေးနေပြီး ကိုယ်က ပြန်မေးခွင့်တောင် မရလိုက်ဘူး။ ဘယ်သူဘယ်ဝှာလဲ ဆိုတာကိုလည်း မသိရ။ ဒွတ်ခ ...
မပြောချင်ရင် Block လုပ်လို့ရတဲ့အရာကို ဘာဖြစ်လို့ ရေးကြီးခွင်ကျယ် စာတစ်စောင် ပေတစ်လွှာ လုပ်နေရလဲ ဆိုတာကတော့ သူတို့ကို Block မလုပ်ခင် မေးမြန်းစုံစမ်းနေတာကို သည်းမခံနိုင်လို့ပါပဲ။ ဂျီတော့ခ် မသုံးပဲ နေပေါ့လို့ ပြောချင်ရင်လည်း အလုပ်သဘောအရ လိုအပ်ချက်အရ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ ဂျီတော့ခ် ၀င်ကို ၀င်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာ လို့ ပြန်ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ အခုဒီပို့စ်ကြောင့် စိတ်အနှောင်အယှက် ဖြစ်သွားရရင် သွေ့ပုချိပါ။ ကျွန်တော့်ကို အီးမေးလ် မပို့ချင်လောက်အောင် အမြင်ကတ်သွားရင်လည်း ရွှေသဘောတော် အလိုကျပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ မငြိုငြင်ပါဘူး။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုတောင် ခေါ်ပါမယ်။
အဲဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိပ်စာတွေကို BCC မှာ သတိတရ ထည့်ပြီး ပို့ပေးစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တစ်ပါးသူ ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရပဲ အီးမေးလ်လိပ်စာကို To မှာ စုပြုံထည့်ပြီး အီးမေးလ်ပို့တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါး မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။
မနေ့က အူကြောင်ကြောင် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။
Posted by JulyDream at 3:48 PM No comments:
Posted by JulyDream at 7:04 PM 8 comments:
စွမ်းဆောင် တာဝန်ကြေခဲ့ပြီ ...
ပေါကြွယ်ဝသတဲ့၊ ဒဏ္ဍာရီနဲ့ ပုံပြင်များ ...
ခရီးဖြန့်ဖို့၊ စွယ်တော်ရွက်တို့ ခြေရာများ ....
ဆယ်စုနှစ်များ၊ အချိန်နဲ့ ဒီရေတွေစား
အမေ့နားမှာ၊ မတတ်မသာ မနေနိုင်လို့
ရေကြည်ရာမှာ ကော်လာပြာ တချို့
စွယ်တော်ရွာသို့၊ လွမ်းနေဆဲပါအမေ ....
ကံကိုသာ ရိုးမယ်ဖွဲ့၊ ခေတ်ဆိုးတရား
ရှုမှတ်ပွါးရင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော် ခဲ့ချေပြီ ....
မမြင်သာလို့ မောင်းထုတ်၊ မကြင်နာလို့မဟုတ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ဆရာကန်တော့ပွဲ အမှတ်တရထုတ် စာအုပ်မှတဆင့် ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by JulyDream at 10:16 AM2comments:
၃၂၇/၈၇ ဒူးယားကိုလည်း လွမ်းတယ် ...
မေတ္တာပေါင်းကူးက ကျက်ကြီး ကျက်ကလေး
လကုန်ကျတော့ ဇယ်တောက်ပြီး ဗိုက်မှောက်
၄၅ ဘတ်စ် ပြားခြောက်ဆယ်
Refund နို့ဆီ ၂ကျပ်
တစ်ပဲဖိုး လှည်းကျိုးအောင် ရသတဲ့
ဆန့်တန်းရင် ကမ္ဘာပတ်လို့ ရနိုင်ရဲ့။
Exam ပူမိမှ ပတ်ကာပြေး
တိုးဝင်ကာ ဝေဒနာ ဖြစ်မှ
ဟောင်းနွမ်း မသွားတာ သေချာတယ်။
A, B, C, D နဲ့ E
စွယ်တော်ရိပ်နဲ့ ကာတွန်း Box
Book shop နဲ့ ၁-၂-၂၅
Library နဲ့ LCR
မာနကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ ဂျီဟော
အနိစ္စ၊ အနတ္တ သဘောတွေလဲ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်းကို လွမ်းတယ်
ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာကို လွမ်းတယ်၊
ဝေးခဲ့ပြီ ပန်းခရမ်းပြာရေ ...
အလွမ်းတွေကို စမ်းရေထဲမှာ မျှောလို့လဲမရ
Posted by JulyDream at 12:38 PM4comments:
လှပတဲ့ အရိပ်ကောင်းတွေ ပေးတဲ့
အမိကျောင်းအိုကြီး အနားမှာ ကင်းမဲ့ ...
အမေ တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာလေ ....
အဝေးက အကြိမ်ကြိမ် ဦးခိုက်
တစ်ဖန် ပျိုမျစ်နိုင်ပါစေလို့ ...
လက်တွင်ဂီတာ ၊ ဘာဂျာတယော
ဘီလ်ဒင် ၀မ်း တူး
လွင်လွင် ဘဲလ်သံ၊ စီစီညံကို
ဂဏန်းတွက်သူ၊ စာကျက်သူတွေ ....
အားပေးသန်သူတို့ စုဝေးရာ ....
ဘ၀ဂ်ထိညံ ကျီစယ်သံ ....တို့
ကန်သာယာ ဦးချစ် ခြောက်နှစ်ခြောက်မိုး
ဘယ်အရာမှန်၊ ဝေဖန်တတ်သူ ....
စွယ်တော်ရိပ် ... တဲ့
Posted by JulyDream at 12:26 PM No comments:
အမေဟာ အပြုံးနဲ့ ဆီးကြိုတယ်။
အမေဟာ ကျွန်တော်ဘက် အမြဲနေခဲ့တယ်။
ကိုငှက်ကြီးရဲ့ အမေစီးရီးက သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ တေးရေးကတော့ ဆောင်းဦးလှိုင်ပါ။ အမေကို ချစ်သော သားများ...သို့ (ထိုထက်ပို၍) အဝေးရောက် သားများ...သို့ (ထိုထက်ပို၍) သားဆိုးများ...သို့ အထူးသဖြင့် အမေ့ကိုချစ်သော အဝေးရောက် သားဆိုးများသို့ ရည်ညွှန်းပါသည် လို့ ကိုငှက်ကြီးကတော့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမေ့ကိုလည်း ချစ်ပါတယ်။ အခု အဝေးကိုလည်း ရောက်နေပါတယ်။ သားဆိုးလား ဆိုတာတော့ အမေ့ကိုပဲ မေးမှ သိမှာလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မဆိုးဘူးလို့ ထင်တာပဲဗျ။
အမေဆိုတာ အနှိုင်းမဲ့ အကြွင်းမဲ့ မေတ္တာရှင်ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိတဲ့... နွေးထွေးတဲ့... မေတ္တာကို အစဉ်အမြဲပေးနေသူပါ။ လောကလှည့်ကွက်ထဲမှာ အမျက်ရှမိတဲ့အတွက် အမေရဲ့မေတ္တာကို လတ်တလောမှာ နားမလည်မိတဲ့ သူတွေလည်း တစ်ချိန်မှာ နှလုံးသားလှတဲ့ အမေ့အပေါ်မှာ နားလည်စေချင်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အယောင်ဆောင် ကြင်နာမှုများအလယ်မှာ အမေဆိုတာ အေးမျှတဲ့ အရိပ်စစ် တစ်ခုဆိုတာကို သိစေချင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်လို အဝေးမြေကို ရောက်နေတဲ့သူတွေအဖို့ မှန်းဆလို့ တမ်းတကာ လွမ်းရတဲ့ အချိန်လေးတွေပဲ ရှိနေပါတယ်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 8:06 PM5comments:
Posted by JulyDream at 7:18 PM 18 comments:
Posted by JulyDream at 11:56 AM 8 comments:
Posted by JulyDream at 10:29 PM9comments:
Posted by JulyDream at 11:08 AM6comments:
နှင်းဆီနီနီက အစားအသောက်ဆိုင်တွေ ပါတ်သတ်ပြီး TAG ထားပြန်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ ရန်ကုန် အစားအသောက် လမ်းညွှန် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်က အစားအသောက်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သိပ်မသိတာ များပါတယ် ခင်ဗျ။ သိသလောက် တတ်သလောက်လေး ရွှီးရတော့မှာပေါ့။
တာမွေ၊ ကျောက်မြောင်းထဲက နိဂြောဓလမ်းက ပုဇွန်ခွက်ကြော်သုပ်ကတော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကျောက်မြောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုံဖြစ်ရင် အဲဒီဆိုင်ကို ခြေဦးလှည့်တာ များပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်က အချဉ်ကောင်းတာပါ။ ပုဇွန်ခွက်ကြော်လေး ၂ ခုကို သခွါးသီး ကြက်သွန်စိမ်းလေးထည့် ငရုတ်သီးမှုန့်လေးဖြူး အချဉ်ရည်လေး များများစမ်းပြီး အသုတ်သုပ်ပေးတာပါ။ ဘူးသီးဟင်းခါးလေးပါ ပေးပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ ကော်ပြန့်ကြော်၊ ပဲပြားကြော်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဇံ စတာတွေလည်း အစုံရပါတယ်။ အရင်တုန်းက တစ်ပွဲကို ၂၀၀ ကျပ်ပါ။ အခုလောက်ဆို ၃၀၀ ကျပ် ကျော်နေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြာဇံသုပ်နဲ့ အဲဒီ ပုဇွန်ခွက်ကြောသုပ်ကိုပဲ စားလေ့ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြိုက်ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ဆိုင်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်က နန်းထိုက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ပါ။ သိမ်ဖြူလမ်း အကျော်လေးကပေါ့။ အဲဒီဆိုင်မှာက ရှမ်းအစာ အစုံအလင်ကို ရပါတယ်။ ညပိုင်း နေပြည်တော်၊ ရှေ့ဆောင်ဘက်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေ ချိန်းပြီး ထွက်လာရင် ညစာကို အဲဒီဆိုင်မှာ စားလေ့ရှိတယ်။ ဆန်စီး၊ တို့ဟူးနွေး၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စတာတွေ စားဖြစ်သလို ယိုးဒယား သဘောင်္သီးထောင်းကိုလည်း ငရုပ်သီးစပ်စပ်နဲ့ မှာလေ့ရှိတယ်။ တခါတလေ ငါးထမင်းထုပ်၊ အင်းလေး ထမင်းချဉ်တွေကိုလည်း စားတယ်။ ညပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုလိုက်ကြီး သွားစားကြတာဆိုတော့ သဘောင်္သီးထောင်းက ၂ ပွဲလောက် အနည်းဆုံး မှာရတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် အနံ့လေးပဲ ရှုလိုက်ရမှာ။ မြင်တောင် မြင်လိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ လက်တွေက သွက်ပါ။ အဲဒီဆိုင်မှာ ငရုတ်သီးစပ်တာနဲ့ အအေးတွေ မှာသောက်၊ ပြီးတော့ ဗိုက်တွေ ဖောင်းကားပြီး ရုပ်ရှင်ရုံကို မနည်းကို လမ်းလျှောက်ယူကြရတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။
နောက်တစ်ဆိုင်က ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံရှေ့က အာဆင်နယ် ဆိုတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မနက်ပိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရား သွားဖူးဖြစ်ရင် အပြန်မှာ ၀င်စားကြတဲ့ ဆိုင်ပါ။ အဲဒီဆိုင်မှာက အစုံရပါတယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ နန်းကြီးသုပ်ကနေ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်ဟင်းခါး ရသလို ... မလိုင်နံပြား၊ တိုရှည်၊ အာလူးပူရီ၊ ကီမား ပလာတာ ကုလားစာလည်း အစုံရသလို ... ကြက်သား ကောက်ညှင်းထုပ်၊ ပေါက်ဆီ၊ ဂဏန်းလက်မပေါင်း၊ ၀က်သားပေါင်း စတဲ့ တရုတ်စာတွေလည်း ရပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကလည်း အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက် တစ်မျိုးမှာကြတာနဲ့ သူမှာတာ ယူစား ကိုယ်မှာတာ သူယူစားနဲ့ အစုံလေးကို စားရသောက်ရပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ ဂျာနယ်မျိုးစုံလည်း ရောင်းတော့ ဂျာနယ်ဖတ်လိုက် အစားအသောက်တွေ စားလိုက်နဲ့ မနက်ခင်းလေးတစ်ခုကို ပျော်ပျော်ပါးပါး လှလှပပလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လေ။
နောက်ထပ် ရေးဖို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ကြို့ကုန်းကျောင်းတော်ကြီးက နွေအေး ကဖီးပါ။ ၀ိုင်တီယူ တတိယနှစ် စတက်ခဲ့ကတည်း ကြို့ကုန်းကျောင်းက ကန်တင်းမှာ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နွေအေးက လှိုင်သာယာမှာလည်း လာဖွင့်ပေမယ့် လူမနိုင်တာနဲ့ ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကြို့ကုန်းကျောင်းမှာပဲ ဖွင့်တော့တယ်။ ကျောင်းကနေ ကြို့ကုန်းကို ဆရာမတွေ ပြန်ပို့တဲ့ကားကြုံရှိရင် လှိုင်သာယာမှာ မစားတော့ပဲ ဗိုက်အဆာခံပြီး ကြို့ကုန်းကျောင်းထိ ပြန်လိုက်သွားပြီး နွေအေးမှာပဲ စားလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ စားရင် ပသျှူးထမင်းကြော်ကို မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်လေးနဲ့ စားဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် ပဲနို့ ဒါမှမဟုတ် စပါကလင် တစ်လုံးသောက်လေ့ ရှိတယ်။ ကျောင်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ပြီးတော့ Measured Drawing Camp ၀င်တုန်းက မနက်ပိုင်းဆို ကြက်ဥကြော်တစ်လုံးနဲ့ ပဲပြုတ် ထမင်းကြော်ကို လက်ဖက်ရည် ချိုကျတစ်ခွက်နဲ့ အမြဲတမ်း စားလေ့ရှိခဲ့တယ်။ ပုံဆွဲစခန်းဝင်နေတဲ့ တလျှောက်လုံး အဲဒီလိုပဲ မနက်စာ တစ်မျိုးတည်းကို စားနေတာလေ။ အဲဒီလောက်ထိ အစွဲအလန်းကြီးကြီးနဲ့ စားလေ့ရှိခဲ့တယ်။ ညပိုင်းဆိုရင်လည်း ပသျှူးထမင်းကြော်ပဲ။ ဆိုင်မှာ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ မှာစရာမလိုအောင် နွေအေးက ဆိုင်ရှင်လေးလေးတို့က အလိုက်သိနေကြတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့်လည်း အဲဒီဆိုင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ထိုင်ခဲ့တာ။ လက်ရာလည်း တကယ် ကောင်းပါတယ်။ ၀ိုင်တီယူ ကျောင်းတော်ကြီးက နွေအေးကို တကယ်ကို လွမ်းမိပါတယ်။
သြော် အခုတော့ အဲဒီလို ဘ၀လေးတွေကို တကယ်ပဲ လွမ်းမိပါတယ်။ အင်း တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ပျော်ရာမှာ မနေရ ... တော်ရာမှာ နေရတာ ဆိုတော့လည်း ... အခုတော့ လွမ်း နေရုံမှတပါး အခြားမရှိ။
Posted by JulyDream at 4:30 PM 11 comments:
Posted by JulyDream at 12:03 PM 17 comments:
ဒီနေ့က စကာင်္ပူမှာရော မြန်မာပြည်မှာရော Deepavali ဒီပါဝလီနေ့လေ။ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်တစ်ခုပဲပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ အလေးအမြတ်ထားတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ကျင်းပကြတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော် Festival of Light တစ်ခုပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကုလားသီတင်းကျွတ်ဆိုပြီး အလွယ် မှတ်ထားကြခဲ့တယ်လေ။ တကယ်တော့ မြန်မာ သီတင်းကျွတ်နဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး။ မီးထွန်းတာလေးပဲ တူကြတာပါ။ ဒီပါဝလီနေ့က အများအားဖြင့် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းနဲ့ နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းကြားလောက်မှ လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သီတင်းကျွတ်ထက်တော့ နောက်ကျလေ့ ရှိပါတယ်။
ပွဲတော်တိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နောက်ခံသမိုင်းပုံပြင်လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ အခု ဒီပါဝလီနေ့မှာလည်း နောက်ခံပုံပြင်လေးလည်း ရှိတာပေါ့။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက Pradyoshapuram ပြည်မှာ Narakasuraဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးက အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသတဲ့။ အဲဒီ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးရဲ့ အနိုင်ကျင့် စော်ကားမှုတွေကို တိုင်းသူပြည်သားတွေခင်မျာ တောက်လျှောက် ခံစားနေရတာပေါ့။ နောက်ဆုံး မခံမရပ် ဖြစ်လာတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ Lord Khrishna ဆီကို သွားရောက်ပြီး ကူညီစောင်မဖို့ တောင်းပန်ကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ Lord Khrishna လည်း စစ်ကြေညာပြီး မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကို ၀င်ရောက် နှိမ်နင်း တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးကြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကို အောင်မြင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် တစ်ခုအနေနဲ့ အမှောင်ကိုခွင်း အလင်းဆောင်တဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်ကို အခုလို ဒီပါဝလီနေ့အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်အထိမ်းအမှတ် တစ်ခုက တိုင်းပြည်ကနေ မိထွေးဖြစ်သူရဲ့ ၁၄ နှစ်ကြာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ Rama ရာမမင်းသားနဲ့ ကြင်ယာတော် Sita သီတာ မင်းသမီးလေး၊ ညီတော် Lakshmana လက္ခဏာမင်းသားတို့ ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေက သူတို့ပြန်လာရာ လမ်းတလျှောက်မှာ ဆီမီးခွက်လေးတွေ ထွန်းညှိပြီး ကြိုဆိုခဲ့တာကနေ စ ခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်က ဒီပါဝလီနေ့က ဟိန္ဒူတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုပါပဲ။
ပွဲတော်နေ့ မတိုင်ခင် ၂ ပတ်လောက်ကတည်းက ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ အလုပ်များကြပါပြီ။ အိမ်တွေကို အသစ်ပြန်လည် မွမ်းမံတာတွေ၊ ဆေးသုတ်တာတွေ၊ သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်နေကြပါပြီ။ ဆိုင်တွေမှာလည်း ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ပို့စ်ကဒ်တွေ၊ ရိုးရာအ၀တ်တွေ၊ ကော်ဇော်တွေ၊ ပန်းတွေကို ရောင်းချနေကြပါပြီ။
ပွဲတော်နေ့မနက်မှာတော့ ဟိန္ဒူတွေ မနက် ၃ နာရီကတည်းက အိပ်ရာစောစော ထကြပါပြီ။ မနက်စောစောမှာပဲ နံ့သာဆီမွှေးတွေနဲ့ Oil Bath ရေချိုးသန့်စင်ကြပါတယ်။ အဲဒါက ဒီပါဝလီနေ့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစဉ်အလာ လုပ်ထုံးတစ်ခုပါပဲ။ အ၀တ်အစား အသစ်တွေကို ဆင်မြန်းကြပါတယ်။ အရောင်စုံ အသွေးစုံပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနက်ရောင်ကိုတော့ ရှောင်ကြပါတယ်။ လူကြီးမိဘတွေကို အရိုအသေ ပေးကြပါတယ်။ မနက်စာ စားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဘုရားကျောင်းတွေကို သွားပြီး ၀တ်ပြု ဆုတောင်းကြပါတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ အိမ်တွေမှာ ဆီးမီးခွက်လေးတွေ စီတန်းထွန်းညှိပြီး အလှဆင်ထားကြပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ မီးရှုးမီးပန်းတွေ ဆော့ကစားကြပြန်တယ်။ ပထမနေ့မှာ ဘယ်မှာမသွားပဲ အိမ်မှာပဲ နေ့လေ့ရှိပြီး အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ ဧည့်သည့်များကို ဧည့်ခံကြပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ ၉ ရက်နေ့ကလည်း တရားဝင် ရုံးပိတ်ရက် တစ်ခုပါပဲ။
ရုံးက ကုလားတွေ အားလုံး ရှေ့ ၁ ပတ်ကတည်းက အိန္ဒိယပြန်သွားလို့ ဒီမှာကတော့ ဘာမှလည်း မစားရဘူး၊ ဘယ်ကိုမှလည်း လည်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ စလုံးက Little India မှာ စည်ကားမှန်း သိပေမယ့်လည်း နေလို့ကလည်း မကောင်းဆိုတော့ ဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပြန်ဘူး။ မျက်မှန်ပါဝါ တိုးနေလို့ လူက အောက်ခြေလွတ်နေတယ်လေ။ မြောက်ကြွမြောက်ကြွ ဖြစ်နေလေရဲ့။ တော်ကြာ မတော်လို့ ချော်လဲရင် လူကြားထဲမှာ နင်းခံနေရအုံးမယ်။ အဲဒါကြောင့် မသွားတော့ပါဘူး။
Posted by JulyDream at 6:10 PM3comments:
rdef;rudk,fwGif; xnfh&aom a[mrkef;aq;ygonfh uGif;
wpf&uf wpfMudrfvnf; aq;awG raomufcsifbl;? ta&Nym;atmufudk aq;acsmif;av;awG xnfh&rSm? aq;xdk;&rSmudkvnf; aMumufw,f qdkwJh trsdK;orD;awG twGuf a&G;p&mvrf; wpfckusefygao;w,f/ 'guawmh rdef;rudk,fxJudk xnfh&wJh uGif;yg/
trsdK;orD;&JU rdef;rudk,fxJudk xnfh&wJh uGif; qdkwmuawmh tcsif;5pifwDrDwm vHk;ywftxl4rDvDrDwm &SdNyD; tufpfx&dk*sif eJU y&dk*sufpwif a[mfrkef;2rsdK;ygwJh uGif;aysmhuav;yg/ vl&JU cE¨mudk,frSm aq;awGudk aoG;xJ a&mufoGm;apzdkU aoG;aMumxJ xdk;wm? aq;aomufwm eJU <uufom;aq;awG xdk;wmtNyif aq;udkpkyf,lEkdifpGrf;&SdwJh wNcm;enf;vrf;awG &Sdygw,f/ touf&SLvrf;aMumif;xJtwkdif; aq;udk &SLoGif;wm? ta&Nym;uae pdrfh0ifapwm awG&,f? ptdkvrf;aMumif; eJU rdef;rudk,fvrf;aMumif; pwmawG&,f[mvnf; aq;udk udk,fcE¨mxJ a&mufapEdkifwJh enf;vrf;awGxJu OyrmawGyg/
'DuGif;av;awG[mvnf; rdef;rukd,fvrf;aMumif;&JU aq;pkyf,lEkdifpGrf;udk taNccHNyD; vkyfxm;wmygyJ/ uGif;i,fav;udk rdef;rudk,fxJ xnfhvdkufNyDqdkwmeJU ab;ywfywfvnfu aoG;aMumawG&SdaewJh eH&HawGxJ aq;awGpNyD;pdrfh0ifygw,f/ uGif;av;udk3ywfwdwd xm;NyD;wJhaemufrSm NyefxkwfNyD; 1 ywf em;&ygw,f/ uGif;udk xkwfvdkufNyD; &ufrMumcifrSmyJ &moDvmygvdrfhr,f/ 1 ywf NynfhoGm;NyDqdk&ifawmh aemufxyf uGif;topfudk xnfhNyD; vpOf 'DvdkvnfywfaezdkUyJ Nzpfygw,f/
uGif;xnfhzdkU qHk;Nzwfvdkufw,f qdk&ifawmh &moDpvmNyD; yxr5&uftwGif;rSm pxnfhzkdUvdkygw,f/5&uftwGif; poHk;NzpfwJh trsdK;orD;awG twGufawmh tumtuG,f bmrS axGaxGxl;xl; xyfoHk;p&m rvdkbJ vpOf vnfywfoGm;vdkU&ygNyD/5&ufxuf aemufusr,f qdk&ifawmh uGif;xnfhNyD; yxr 1 ywfrSm wNcm; tum tuG,f wckck wGJoHk;zdkU vdkygw,f/
aomufaq; aomufae&muae uGif;ukd aNymif;oHk;csifwJh trsdK;orD;awG twGuf? aq;u'fudk oHk;aewJhb,faeUrSm Nzpfaeae uGif;udk pNyD; oHk;vdkU&ygw,f/
uGif;udk trdsK;om;eJU twlaepOfrSm xkwfp&m rvdkygbl;/ 'gayr,fh tcsdKUtrsdK;orD;awG taeeJU rdef;rudk,fxJ uGif;&SdaeNyD; trsdK;om;eJU qufqH&wm uoduatmuf Nzpfw,fqdk&ifawmh xkwfvdk&if cPxkwfvdkU&ygw,f/ 'gayr,fh owdxm;&rSmu3em&DxufydkNyD; rxkwfxm;oifhygbl;/ xkwfr,fqdk&ifvnf; oefUoefU&Sif;&Sif udkifwG,fxdef;odrf; &ygr,f/
rawmfwq xGufuscJh&ifvnf;3em&Dxuf rydkzdkU ta&;MuD;ygw,f/3em&D rausmfbl; qdk&if xGufusoGm;wJh uGif;i,fudkyJ a&eJUNyefaq;NyD; aocsm ae&mwus Nyefxnfhxm;&if &ygNyD/ uGif;aysmufoGm;w,f? 'grSr[kwf roefUwJh ae&may:usoGm;w,f qdk&ifawmh uGif;topfudk tpm;xdk;NyD; usoGm;wJhuGif;udk xkwf&r,fh &ufrSmyJ Nyefxkwf&ygr,f/
xGufuswmyJ NzpfNzpf? xkwfxm;wmyJ NzpfNzpf3em&DausmfoGm;w,f qdk&ifawmh7&ufwdwd wNcm;tumtuG,f oHk;zdkU vdkygw,f/
Nyu©'defu vawGtwkdif; &moDeJU aq;uGif;xnfhwmudk xdef;xm;csifwJh trsdK;orD;awGtwGufawmh uGif;ukd3ywf (21 &uf) eJU rxkwfbJ 25 &uf xm;vdk&if xm;Ekdifygw,f/ usefwmawGawmh3ywfxm;wJh enf;eJU twlwlygyJ/
uGif;ukd xkwf&r,fhaeUrSm rxkwfNzpfbJ arhoGm;cJh&if...
&ufaygif; 28 &ufatmuf -7&ufem;NyD; uGif;topfudk yHkrSeftwdkif;qufxnfh&ygr,f/
28 &uf eJU txuf -7&ufrem;awmhbJ aemufxyfuGif;topfudk csufcsif; qufxnfh&ygr,f/
35 &ufeJU txuf -7&ufwdwd wNcm;tumtuG,f oHk;&ygr,f/
aemufqHk;owdxm;&rSmuawmh 'DuGif;oHk;enf;[m a[mfrkef;aq;awGyJ Nzpfwm NzpfvdkU a[mfrkef;aq;awGrSm &wJh aumif;usdK;? qdk;usdK;awG twlwlyJ NzpfNyD;.. a[mfrkef;2rsdK;aygif; aq;awGudk raomufoifholawG? owdxm; aomuf&r,fholawG *&kNyKoifhygw,f/ (pm<uif; - a[mfrkef;yg0ifrIuawmh aomufaq;awGxuf yrmP tenf;i,favsmhenf;ygw,f/)
uGif;udkoHk;wJh trsdK;orD;awGrSm wNcm;trsdK;orD;awGxuf rdef;rudk,fu t&nfqif;wm ydkrsm;wwfygw,f/
aps;uGufxJrSmawmh NuvaRing qdkwJh emrnfeJU vlodrsm;ygw,f/
Posted by JulyDream at 5:10 PM No comments:
udkpdk;xuf bavmhrSmawGUvdkufvdkU uRefawmfvnf; prf;oyfMunfUvdkufw,f/ tJ'Davmufxd &mcdkifEIef; rsm;vdrfhr,fvdkU rxifxm;wm trSefygyJ/ uRefawmf bavmh a&;wm rMumao;ygbl;/ t&ifwkef;uawmh zkd&rfawGyJ a&;avh&dSygw,f/ 2003 yk*Hzdk&rfrSm t&ifa&;cJhw,f/ aemufydkif; yk*Hacwfysufvmawmh ae;wpfjrefrm zdk&rfrSm 0ifa&mufa&;om;ygw,f/ 'gayr,fh 2007rSm uRefawmhfarG;aeUjzpfwJh 07-07-07 (2007 Zlvdkif 7) txdrf;trSwf taeeJU bavmhudk pwifa&;om;cJhwmyg/ bavmhoufwrf; tvGef Ekygao;w,f/ tckawmh bavmhavmurSm uRefawmfvnf; aysmfaerdcJhygw,f/ oli,fcsif; todrdwfaqGawGvnf; wdk;vmcJhygw,f/ aemufwpfcsufu7eJU 8 qdkwJh *Pef;av;awGuvnf; uRefawmf BudKufwJh *Pef;av;awGyg/ tJ'D *Pef;av;2vHk; udk tckvdk a&SUaemuf tpOfvkdufav; tajzxGufvmwmudk ydkoabmusrdygw,f/ *kPfxl;rSwfudk3rSwfavmufeJU ausmf&Hkav; ausmfwmayghAsm/
HHow Addicted to Blogging Are You?
'ufydk ac: (3) vcH aq;
NrefrmEkdifiHrSmawmh 'ufydkxdk;w,f? 'ufydkxdk;w,fqdkNyD; emrnfMuD;ygw,f/ Depo-Provera qdkwJh emrnfeJU NzefUa0wJh 'Daq;xJrSmawmh Depomedroxyprogesterone Acetate qdkwJh vlvkyf y&dk*sufpwif a[mfrkef;trsdK;tpm; 150 rDvD*&rf yg0ifygw,f/ <uufom;xJxdk;&wJh aq;rsdK;NzpfNyD; wifyg;<uufom; (odkU) vufarmif;<uufom;awGrSm 3v wpfMudrf xdk;&ygw,f/ wpfESpftwGif; trsdK;orD; 100 rSm3a,mufyJ udk,f0ef&Ekdifacs&SdwmrdkU pdwfcs&wJh oaE¨wm;enf;awGxJrSm 'ufydkxdk;aq; vnf;ygygw,f/ omrmefvlawG odyfrodwJh tcsufwckuawmh 'ufydkxdk;aq;udk wm&SnfoHk;pGJr,fqkd&if Endometrial Cancer vdkUac:wJh om;tdrfeH&Huifqm wrsdK;udk 80% txd tumtuG,fay;Ekdifygw,f/ 'ufykdxdk;aq;awG[m ae&mr[kwfbJ tufwdk;ypf oaE¨wnfNcif;ukdvnf; umuG,fay;EkdifNyD;? aoG;tm;enf; a&m*geJU (Pelvic Inflammatory Disease -PID) vdkUac:wJh trsdK;orD;awGrSm NzpfwwfwJh a&m*gwpfrsdK; tNzpfEIef;awGudkvnf; avsmhenf;apygw,f/
aq;&JUtm;enf;csufwckuawmh t&kd;awG&JUodyfonf;rI (Bone Mineral Density) usapygw,f/ 'DtwGufaMumifh 'ufydkxdk;aq;xdk;wJh trsdK;orD;awG (txl;oNzifh toufi,fpOfuwnf;u xkd;aq;poHk;olr,fh trsdK;orD;awG? aq;udk wm&SnfoHk;r,fh trsdK;orD;awG) [m u,fvfpD,rf (Calcium) aq;Nym;awG aomufzdkU vkdtyfaumif; vdktyfygvdrfhr,f/
y&kd*sufpwifaq;awG&JU xHk;pHtwkdif; yxr poHk;pOfumvrSmawmh &moDyHkrSefr[kwfwmudk MuHK&Ekdifygw,f/ aq;xdk;wm Mumvm&ifawmh trsdK;orD;[m &moDvHk;0rvmawmhbJ &yfoGm;wmrsdK; Nzpfavh&Sdygw,f/
'ufydkxkd;r,fh trsdK;orD;awG odxm;oihfwmuawmh aq;&JUtmedoif[m aq;NzwfvdkufNyD; tawmfMumwJhtxd &SdaeEkdifwmrdkU aq;NzwfNyD; 10 v- 1 ESpf MumwJhtxd uav; r&wwfygbl;/ oaE¨wm;aq;udk aq;NzwfNyD;csufcsif; uav;,lcsifwJh pHkwGJawGoHk;zdkU roifhawmfygbl;/ vlajymrsm;wJh jyóemwcku xdk;aq;xdk;NyD; uav;r&awmhbl;qdkwJh tcsufyg/ trSefawmh uav; r&awmhwm (NrHKoGm;wm) r[kwfygbl;/ xkd;aq;udk Mum&SnfoHk;xm;zl;wJh trsdK;orD;awG&JU 70% [m aq;&yfNyD; 12 v twGif; uav; &oGm;EkdifNyD; 90% uawmh 24 v twGif; uav; &Ekdifygw,f/
a&S;,cif okawoeawGt& 'ufydkxdk;aq;udk a&G;cs,fwJh trsdK;orD;awG[m aq;udk wpfESpfMum oHk;pGJNyD;csdefrSm udk,ftav;csdef5aygifavmuf wufvmw,fvdkU qdkMuayr,fh aemufydkif; okawoeawGuawmh aq;aMumifh ododomomMuD; udk,ftav;csdefwufwm rawGU&bl;vdkU aNymMuygw,f/ (ckcsdeftxdawmh udk,ftav;csdef wufw,f? rwufbl; qdkwJh udpöudk okawoe vkyfolawG tcsif;csif;Mum;rSm tNiif;yGm;aeMupJ Nzpfygw,f)/
ESHUESHUpyfpyf &SdwJholawGuawmh3vcH aq;tNyif 1 vcH aq;vdkU tNyifrSm aNymaeMuwJh aq;taMumif;udk Mum;zl;ygvdrfhr,f/ 'Daq;awGuawmh tay:u 'ufydkaq;awGrSmygwJh y&dk*sufpwif a[mfrkef; 25 rDvD*&rfeJU Estridiol Cypionate vdkUac:wJh tufpfx&dk*sif a[mfrkef;5rDvD*&rfudk aygif;pyfxm;wm Nzpfygw,f/ urÇmUusef;rma&; tzGJU WHO uxkwfwJh wHqdyfuawmh Cyclofem (odkU) Cyclo-Provera qdkwJh emrnfeJU Nzpfygw,f/ tar&duefEkdifiHrSmawmh Lunelle qdkwJhemrnfeJU vlodrsm;ygw,f/ vpOf obm0twkdif; &moDvmNyD; yHkrSef NzpfwmaMumifh wpfvwpfMudrf xdk;&wJh aq;Nzpfayr,fh a&G;cs,f oHk;pGJzl;wJh trsdK;orD; awmfawmfrsm;rsm;u wm&SnfoHk;pGJzdkU qufNyD; a&G;cs,favh&Sdygw,f/ ab;xGufqdk;usdK;awGeJU aqmif&ef a&Smif&efawGuawmh tufpfx&kd*sifeJU y&dk*sufpwif2rsdK;aygif; aomufaq;awGeJU xyfwlavmufygyJ/
Posted by JulyDream at 9:07 AM No comments:
eHygwf2acgif;pOf.. ]a[mfrkef;aq;rsm; aomufoHk;Ncif;} qdkwmudk tm;vHk;yJ NiD;aiGUaeNyDqdkwm odayr,fh aomufwJhtaMumif;yJ NyD;ao;NyD;? oHk;wJhtaMumif;awG usefaeygao;w,f/
ta&Nym;ay: aq;Nym; uyfNcif;
a[mfrkef;ygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;oHk;Ncif; pwmawG Nzpfygw,f/
ta&Nym;ay: aq;Nym;uyfNcif; (Contraceptive patch)
t&G,ftpm;tm;Nzifh 20 pwk&ef;pifwDrDwm cefUom&SdwJh ta&Nym;ay:uyfaq; Contraceptive patch awG[m a[mfrkef;2rsdK;pyf aomufaq;awGvdkyJ tufpfx&dk*sif a[mfrkef;eJU y&dkuf*sufpwif a[mfrkef;awGygygw,f/ 'gaMumifhvnf; aq;tmedoifeJU aqmif&ef a&Smif&efawG[m pDtdkpD (Combined Oral Contraceptive Pills) aomufaq;awGeJU twlwlyJ Nzpfygw,f/
aq;Nym;awG[m ta&Nym;rSm wpfcg uyfxm;vdkufNyDqkd&if7&ufwdwd a[mfrkef;awGudk xkwfay;Ekdifygw,f/ aq;Nym;udkawmh (oefU&Sif; aNcmufaoGUaewJh) vufarmif;tNyifbufae&m? ausmbuf vufNyifae&m? 0rf;Adkufatmufydkif;eJU wifyg;ae&m pwmawGrSm uyfxm;Ekdifygw,f/ owdxm;&rSmuawmh &ifom; eJU &ifom;w0dkufrSm ruyfrdapzdkUygyJ/ aq;Nym;wpfckudk wpfcguyfxm;NyD;&if wpfywfMumawmhrS aemufwpfNym; xyfvJzdkU vdkwmrkdU txl;oNzifh arhwwfolawGtwGuf oifhawmfygw,f/ aq;Nym;udk3ywfqufwkduf uyfNyD;... 1 ywfwdwd aq;Nym;ruyfbJ xm;&ygw,f/ (aomufaq;rSm 21 &ufaomufNyD;7&uf aq;raomufwmeJU oabmw&m; twlwlygyJ)/ aq;Nym;wpfNym;eJU wpfNym; taNymif;rSm 'kwd,aq;Nym;udk yxraq;Nym; uyfcJhwJh ae&mudk a&SmifNyD; uyfoifhygw,f/ aq;Nym;udk cGmvkdufNyD;vdkU usefaer,fh aq;t<uif;tusefawG eJU uyfcGm tpteawGudkawmh uav;vdrf;wJh tqD (baby oil) oHk;NyD; oefUpifatmif vkyfvkdU&ygw,f/
udk,fvufvIyf&Sm;rI rsm;olawGeJU ylNyif;NyD; acR;xGufapwJh &moDOwkawGrSm ae&olawGrSm aq;Nym;uGmuswm ydkNzpfwwfygw,f/ aq;Nym; uGmusoGm;wmudk ododcsif; Nyefuyfay;zdkU vkdygw,f/ NyefuyfwJhtcgrSmvnf; (NzpfEkdifr,fqdk&ifawmh) wNcm; yvmpwm? uyfcGm pwmawG roHk;bJ NyefuyfEkdif&if taumif;qHk;Nzpfygw,f/ aq;Nym;uGmuswm 24 em&D rausmfbl;qdk&ifawmh yHkrSefvdkyJ qufuyfoGm;NyD; wNcm;bmrS pdk;&drfp&m r&Sdygbl;/ 24 em&D ausmfoGm;r,f ('grSr[kwf) uGmusoGm;wm tcsdefb,favmuf MumoGm;rSef; rodvdkufbl; qdk&ifawmh aq;Nym;topfwpfNym; aNymif;uyfoifhNyD; 1 ywfwdwd wNcm;tumtuG,fenf;rsm; oHk;zdkU vdkygvdrfhr,f/
Posted by JulyDream at 7:01 PM No comments: